ဒါက iCloud Photo Library အလုပ်လုပ်ပုံပဲ ငါက Mac ကပါ
iCloud Photo Library အလုပ်လုပ်ပုံ
Pedro Rodas | | Apple, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
Mac OS X စနစ်သည်ဗားရှင်းအားဖြင့်ဗားရှင်းကိုပြောင်းလဲနေခြင်းသည်မည်သူမျှလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ အခုဆိုရင်သုံးစွဲသူများစွာကသူတို့မြင်တွေ့နေရတာကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးပြီးပိုပြီးပိတ်ထားနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါ။
iCloud Photo Library နှင့်သူမရဲ့ MacBook အပါအ ၀ င် iCloud Photo Library နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ iCloud Photo Library ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသောကြောင့်သူ၌သိုလှောင်မှုပြproblemsနာများရှိသည် သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးမှာသူတို့ရဲ့ iCloud cloud ထဲမှာတူညီတဲ့ gigs ပမာဏမရှိကြလို့ပါ။
La ICloud ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက် ဓာတ်ပုံများ streaming ပြီးနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလာ၏။ streaming photos system သည်အလုပ်လုပ်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အတိုင်းသင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများအတွင်းသို့မဟုတ်သင်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများပါ ၀ င်သည် Mac ပေါ်ရှိဓာတ်ပုံများအက်ပ် ၄ င်းတို့ကို iCloud Cloud တွင်အများဆုံး ၁၀၀၀ အထိသိုလှောင်ထားသည်။ ဤအချက်မှာ ၁၀၀၁ ကိုရှင်းလင်းရမည်၊ ၁၀၀၂ ကိုရှင်းနိုင်သည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုသည်ဗီဒီယိုများနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လွှင့်ထုတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံ ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤပုံများသည်သင်၏မိုcloud်းတိမ်မှအာကာသကိုနုတ်ယူခြင်းမဟုတ်သော်လည်းသင်၏မိုဘိုင်းစက်နှင့် Mac တို့တွင်နေရာယူသည်။
သို့သော်၏ဆိုက်ရောက်အတူ ICloud ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက် အရာပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်သတိရရမည့်အချက်မှာဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြစ်နိုင်သည့် iCloud Photo Library သို့တင်ထားသောအရာသည်သင်၏ cloud ပေါ်တွင်နေရာယူထားသည်၊ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင် ၅ GB ကျော်နေရာရှိပါကသင်သွားရန်လိုအပ်သည်။ box ကိုနှင့်သိုလှောင်မှုပိုပြီး Gigs နှင့်အတူအစီအစဉ်ကို subscribe ။
ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရင်သူမကသူဟာလစဉ်လတိုင်း Apple အတွက်ငွေပမာဏ ၅၀ GB GB ကိုဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သင်ထိုနေရာကို iCloud Cloud တွင်ဝယ်သောအခါမိုဘိုင်းစက်များနှင့်သင်၏ Mac သည်အလိုအလျောက်တည်ရှိသည် သိုလှောင်မှုအများဆုံးသိုလှောင်မှုအများဆုံးအထိဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများ။
ဤသည်မှာပြသနာဖြစ်သည်။ iCloud Photo Library သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့ရှိပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအနည်းငယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အမှုမှာ 5GB iPhone 16S၊ 1GB iPad Air 16 နဲ့ 128GB MacBook Air ရှိတယ်။ သူမှ 50 GB GB iCloud cloud ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
iCloud Cloud တွင် 50 GB ရှိသဖြင့်သင်၏ iPhone သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို iCloud Photo Library သို့ 16 GB ထက် ကျော်လွန်၍ upload လုပ်နိုင်သောကြောင့်အချိန်ကုန်လာသည်။ သင့် iPhone သည်သိုလှောင်မှုပြproblemsနာများကိုစတင်ပေးခဲ့သည် နှင့်အာကာသကုန်ကြောင်းအဆက်မပြတ်သင်အကြောင်းကြား။ နေရာရရန်သူသည်လျှောက်လွှာမှတဆင့် iPhone မှဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Mac ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှု, ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများ။
သူသည်ထိုသို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စဉ်သူ၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှသူ့ကိုထုတ်ယူခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောစနစ်မှာဓာတ်ပုံနည်းနည်းမျှသာဖြစ်သည်၊ ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်မှရရှိသည်ထက်များစွာနည်းသည်။ ဒါကြောင့်သူကအိုင်ဖုန်း iCloud Photo Library ကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ system ကသူဘာလုပ်ချင်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ delete iPhone မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ် iCloud Photo Library ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
သူသည်ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကိရိယာသို့နှိပ်သောအခါသူသည်ဓါတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများ၏မိတ္တူတစ်ခုရရှိရန် ၁၃ GB ကျော်ကျော်လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် iCloud Photo Library တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းဆည်းဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရတော့မယ်။
နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့သင့် Mac မှာ iCloud Photo Library ကိုဖွင့်ပြီး option ကို activate လုပ်ဖို့ပါ ဒီ Mac ပေါ်မှာမူရင်းကို download လုပ်ပါ။ ခဏကြာပြီးနောက်သူသည် Mac ၌ဖိုင်ပေါင်း ၁၃ GB ကျော်ရရှိနိုင်ခဲ့သည် (Mac သည် 13 GB ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်ဖိုင်အားလုံးကိုပြင်ပ hard drive သို့တင်ပို့ပြီးနောက်သူသည်သူ၏ iPhone ၏ iCloud Photo Library ကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ iCloud Photo Library ၏ဆိုလိုရင်းအရစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်သင်၏ iPad ကို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » iCloud Photo Library အလုပ်လုပ်ပုံ
သူမကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ iPhone ထဲသို့ကူးယူပြီး၎င်းသည်ဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ သင်၏စာကြည့်တိုက်တွင်ဓါတ်ပုံများကိုကူးယူရန်မလိုဘဲကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။
ပရိုဂရမ်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးဖို့အမှားလုပ်မိတယ်။ အဲဒါကိုသုံးရက်အကြာမှာငါသုံးလို့မကောင်းဘူး။ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကငါ့အတွက်သာအတည်ပြုပေးတယ် Apple ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဤအခြေခံပြသနာများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မည်နည်း။
၎င်းသည် iPhone နှင့် iPad များ၌ပြောခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ချိန်ညှိချက်များ / ဓာတ်ပုံများတွင်အဆင်ပြေအောင်ထားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ဓာတ်ပုံတွေဟာ compressed လုပ်ပြီးတစ်ဝက်လောက်ကြာတယ်။
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်မှတ်ချက်ပေးသည့်အမှားများကိုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးသင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအမှားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ iCloud Photo Library ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်သည်၊ မည်ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျသိသည်။ ဤအရာသည်အဖျက်စွမ်းအားရှိသော်လည်းမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူပြီးကြိုဆိုသည်။
Juan Jose Ramirez Lama ဟုသူကပြောသည်
ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းပါးကကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမပြီးဆုံးသေးတာကိုငါသဘောကျတယ်။ သိုလှောင်မှုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောတာကိုငါပြောဖို့လိုတယ်။ အက်ပဲလ်ရဲ့အဆိုအရသင့် iPhone ရဲ့နေရာကို“ အသုံးမပြုတော့ဘူး” ရောင်းတဲ့ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာသိပ်မကွာပါဘူး။ iPhone မှာနေရာလွတ်များရှိနေသေးသည့်ဖိုင်များ၏ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ဗားရှင်းကိုသာချန်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ iCloud စာကြည့်တိုက်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့် 410GB ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရှိသည်။ အကောင်းဆုံးသောဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်သည်၎င်းဓါတ်ပုံများကိုရရှိနိုင်သည့်နေရာကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်၊ များသောအားဖြင့်သင့်အား ၃၀၀mb ခန့်ကျန်ရှိနေသည်။ မင်းက ၉.၇ gb လောက်ပဲရှိတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်နေရာလွတ်လည်းမပေးဘူး။ အိုင်ဖုန်းမှာ iCloud library ကိုသုံးဖို့ငါမရွေးဘူး၊ Mac ပေါ်မှာပဲရှိတယ်၊ ငါ macbook မှာ 300gb ရှိတဲ့အပြင်ပြင်ပ disk တခုမှာစာကြည့်တိုက်ရှိတယ်။ ငါ့မှတ်ချက်ကမင်းကိုအစေခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Juan Jose Ramirez Lama ကိုပြန်ပြောပါ
ဟွမ် Juan José၊ သင်မှန်ပါတယ်၊ ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရွေးစရာအကြောင်းမပြောပေမယ့်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေအရည်အသွေးနိမ့်ကျတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘူးလို့ထင်တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကသူမဖိုင်များကိုအမြင့်ဆုံး resolution ဖြင့်ပြန်လည်ရယူချင်သည်။ ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သို့သော်သူတို့သည်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးကြပါ။ ၎င်းတို့သည်ကိရိယာထဲတွင်သာအရည်အသွေးနိမ့်ကျသည်။ သို့သော်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့ကိုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ကူးယူပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်ယင်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်၊
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုပိုကောင်းအောင်ထားပါက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးနိမ့်နေသည့်ကိရိယာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်မူရင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်နောက်မှ၎င်းတို့ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်သွားသည့်အကောင်းမြင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်၎င်းသည် iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ 400gb ထက်ပိုနေတဲ့အချိန်မှာ external disk ပါတဲ့ mac ထဲမှာနေရာအလုံအလောက်ရှိတယ်။
ထို့အပြင် optimization mode ပါသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်၎င်းတို့ကိုမဖွင့်မချင်းအရည်အသွေးတစ်ခုတည်းကိုသာဆုံးရှုံးစေသည်။ သင်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုကိုဖွင့်သောအခါမူရင်းကို download လုပ်ပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သောဗားရှင်းမဟုတ်ပါ။ ပြနာမှာဓာတ်ပုံများများများလေသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်အမျှအကုန်ပိုများလေဖြစ်သည်၊ ခဏကြာပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုမဖွင့်ဘဲသူတို့သည်အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေသို့ပြန်သွားကြသော်လည်းမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအရည်အသွေးနိမ့်ကျသောကျန်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် google ဓါတ်ပုံများကို၎င်း၏ free mode တွင်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်မတူပါ။
မင်းပြောတာကမှန်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့မထင်မိလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ရင်သူမဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအစဉ်မပြတ်ဖွင့်ပေးပြီး၊ အတူတူပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အချိန်ယူတဲ့တူညီတဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်းကိုပြန်သွားတာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဆောင်းပါးကဒီဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တာကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာကိုကူညီနိူင်တယ်။ ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောစနစ်တစ်ခုနှင့်တူသည်၊ ထပ်မံမပါဘဲ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများသည်အထိခိုက်မခံသောကြောင့် Apple သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ သင်သည်၎င်းတို့ကိုအခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမဟုတ်ပါက၎င်းသည်အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်အရာကို upload တင်မည်ကိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မပြုပါ
သူတို့ကဆာလဖာမဟုတ်တာ၊ အဲဒါဟာ Apple ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုသူကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသင့်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာ (သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်တူသည်) အတွက်အဖြေတစ်ခုတွေ့ပြီဟုထင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းနှင့်မတူပါ။ iCloud စာကြည့်တိုက်အားပိတ်ထားသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ iMac ကမူရင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ အကြံပြုချက်များရှိပါသလား။
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသံသယရှိတယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင် 1iPhone နှင့် 1iPad နှစ်ခုလုံးသည်ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုဖွင့် ထား၍၊ Apple ID နှင့်ယုတ္တိနည်းအရအတူတူရှိပါက၎င်းဖုန်နှစ်ခုသည်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်းပြုလုပ်ခြင်းကိုရောနှောနေသလား။ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် iPad ပေါ်မှာချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မာရီယာ Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာအရမဟုတ်သော်လည်း၊ လွန်ခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်စာကြည့်တိုက်ပျက်ပြားသွားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် Mac စာအုပ်နှင့် Iphone6ကိုရုတ်တရက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်ပ disk တစ်ခုထည့်ထားခြင်းကြောင့် disk မှပစ္စည်းများဖျက်ခြင်း၊ Mac နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုလေ့လာလိုသောကြောင့် ငါ့အလုပ်နှင့်ယနေ့ငါစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်မသိရပါဘူးကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိကွောငျးကို, ငါအားလုံးဓါတ်ပုံများကိုပြင်ပ disk သို့ရွှေ့ပြောင်းနှင့်အာကာသလွတ်မြောက်ရန်စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်, သင်တို့၏ရှင်းပြချက်ကိုကြိုက်ပေမယ့်ငါ don '' t Cloud ပေါ်မှီခိုချင်တယ်၊ ငါဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲသိလား။
Maria Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
lic ။ Matias Colli ဟုသူကပြောသည်
iphone photo library ကိုရှာဖွေသောအခါဂူးဂဲလ်မှရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်လေးနက်သောဆောင်းပါးအနည်းငယ်အနက်မှတစ်ခုမှာ (ထိပ်ဆုံး ၅ ခုတွင်တွေ့ရသည်) ။ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်အတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။
iPhone အတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည့်အချက်မှာ (16 GB) ပါသောဓါတ်ပုံများသည် iCloud နှင့် Synchronize လုပ်ခြင်းကိုပိတ်ပြီး“ Photos in Streaming” ကိုသာ activate လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနည်းနဲ့စက်ကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဓာတ်ပုံများ (ဥပမာသင့် iPhone မှသင့် Mac) သို့ချက်ချင်းပေးပို့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် iPhone မှဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လျှင်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ပြန်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါကသင်၏ Mac (ဓါတ်ပုံ OSX) တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် (သို့) မျက်နှာပြင်ကို ယူ၍ ၎င်းနှင့် ၎င်းကို iCloud နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မည် (အကယ်၍ သင်လိုချင်ပါက၎င်းကိုတွစ်တာ (သို့) အခြားလူမှုကွန်ယက်များတွင်မျှဝေနိုင်သည်) ။
lic ။ Matias Colli
Lic ။ Matias Colli အားပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ
ဟယ်လို! iCloud စာကြည့်တိုက်ကဓာတ်ပုံများကို Wi-Fi ဖြင့်သာတင်မည်၊ ဆယ်လူလာဒေတာအစီအစဉ်ကိုမသုံးဘူးဆိုတာ iPhone မှာဘယ်လိုသေချာအောင်လုပ်မလဲ။
Xavier ပန် ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့၊ သင်က Wi-Fi မှာရှိမှသာဓာတ်ပုံများကို upload လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာအောင်လုပ်ချင်ရင် settings / data ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေဟာဒေတာနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာပြသပါတယ်။
Xavier Pan အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ iMac (El Capitan V1.5 (370.42.0G10.11.6)) တွင်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများ (PH15 (V31 (XNUMX))) ရှိမိုcloud်းတိမ်ငယ်ငယ်ဖြင့်ပုံများဘာကြောင့်ရှိရတာလဲ။
သူတို့ထဲကတချို့ကို 64Gb ရှိတဲ့ iPhone နဲ့ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒါက iMac လိုအားလပ်ဖို့လိုတယ်။ ငါ 50Gb iCloud Free ရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲသုံးနေတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းရန်ကျွန်ုပ်သည် 50Gb ၏ ICloud Storage ဝယ်ယူထားသော်လည်းကျွန်ုပ်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်တွင် Wifi မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဒေတာအစီအစဉ်မှာအကန့်အသတ်မရှိသော်လည်းဓာတ်ပုံများကို Icloud သို့ဝီဖိုင်ရှိလျှင်မည်သို့တင်ပို့ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသောညနေဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် iPhone ရှိ iCloud မှဓါတ်ပုံအားလုံးသည်တစ်ပြိုင်တည်းမဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံများကိုစာကြည့်တိုက်ထဲမထည့်နိူင်ပါ။ သူတို့က iCloud ထဲမှာရှိပေမယ့် iPhone မှာမတွေ့ရဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက် option ကို icloud ဖြင့်ပိတ်ထားပါကရက် ၃၀ အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများသည် iPhone မှပျောက်ကွယ်သွားမည်ဆိုပါကမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အာကာသပြproblemsနာများကြောင့်ဖုန်းနှေးနေသည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို Icloud တွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့ကို hard drive တစ်ခုဆီပို့လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ICloud option ကိုငါမလိုချင်ဘူး၊ ငါပိတ်လိုက်တဲ့အခါရက် ၃၀ အတွင်းမှာ iPhone မှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှမရှိဘူးဆိုတာငါမသိဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် iphone မှဓာတ်ပုံအားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပြီး ၄ င်းကို icloud မှလည်းဖျက်လိုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုအတူတကွရွေး။ မရပါ (SHIFF အလုပ်မလုပ်ပါ၊ မြှားများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ) တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ပါ ဓာတ်ပုံ (၄၅၀၀) ကျော်ရှိသည့်အတွက်အရူးသည်အိုင်ဖုန်းမှ icloud ကိုပိတ်ထားပြီး ၄ င်းတို့ကို icloud မှမဖျက်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရက် ၃၀ ရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ မေးခွန်းမှာ -
ဓာတ်ပုံအားလုံးကို ICLOUD မှပယ်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလား။
မာရီယာ Marta ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းခိုးယူခံရခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တွင် iPhone7Plus ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု !!! ငါသူတို့ကိုလိုအပ်တယ်!
Maria Marta အားပြန်ကြားပါ
ယခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် Apple သည်၎င်း၏ရောင်းအားကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်
Apple TV အသစ်အတွက် VLC ကိုရပြီ